yako e-commerce-saiti - Amazon, Ebay, Allegro uye Etsy ine Propars E-export
Propars E-Commerce Kubatanidzwa
Manage epamba uye epasi rese misika kubva kune yako e-commerce saiti nePropars
Zvigadzirwa / Orders e-commerce
Zviri nyore kwazvo kuita e-kutumira kunze kubva kune yako e-commerce saiti nePropars!
Masheya ese anoteedzerwa otomatiki. Mutengo uye shanduko yemasheya zvinoratidzwa ipapo ipapo.
Unogona kuendesa zvigadzirwa zvako pane yako e-commerce saiti kuenda kuPropars neXML.
Zvinoenderana nechikamu chechikamu pane yako e-commerce saiti, unogona kuvhura zvigadzirwa zvako zvinotengeswa mumisika.
Neine otomatiki inogadziridza, zvigadzirwa zvichangowedzerwa kune yako e-commerce saiti zvinoratidzwa muPropars, uye zvitoro zvako nemasheya mumusika anovandudzwa.
Iwe unogona kuita stock uye mutengo shanduko nekuchengeta yako e-commerce saiti kusvika pari zvino.
Iko shanduko yemutengo yaunoita pane yako e-commerce saiti inoonekwa ipapo pamusika apo chigadzirwa chiri kutengeswa.
Manage e-commerce pane imwechete skrini nePropars pamisika yekubatanidza
Unganidza maodha ako ese pachiratidziro chimwe, invoice nekudzvanya kumwe chete! Inogona kuburitsa e-invoice muhuwandu hwemaodha anobva kunzvimbo dzemusika uye e-commerce saiti; Unogona kudhinda fomu rakawanda rekutakura zvinhu.